Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Ukhenketho lwase-Saudi Arabia kwiMishini ebalulekileyo e-Itali
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Saudi Arabia, ilizwe eliSemthethweni leQabane le-TTG
ISaudi, elona khaya laseArabia, liqinisekisiwe njengeLizwe eliSebenzisanayo leLizwe lamava e-TTG yokuHamba, ukuqinisa ubukho bayo njengendawo ekhokelayo kwezokhenketho kwindawo yentengiso yamanye amazwe. Umnyhadala weQela leMiboniso lase-Italiya uza kubanjelwa eRimini Expo Centre (e-Itali) ukusukela ngomhla we-2021 ukuya kowe-13 kweyeDwarha kwaye yeyona ndawo yentengiso ibaluleke kakhulu e-Italiya kushishino lokhenketho, iqonga elibalulekileyo ekuvuseleleni ukubonelela kunye nemfuno kwilizwe lonke.
Ukusuka nge-Okthobha i-13-15 yalo nyaka, amazwe angama-23 azakuthatha inxaxheba kwi-TTG Travel Experience eRimini Expo Centre.
Umsitho, owokuqala ngohlobo lwawo ukusukela ekuvalweni kwehlabathi kulo nyaka uphelileyo, ubonakalisa ukukhulisa ukuzithemba okukhulu ekusungulweni ngokutsha kwecandelo eliphambili.
IGunya lezoKhenketho laseSaudi lijolise ekuphuhliseni ubuhlakani namaqabane orhwebo kurhwebo kwihlabathi liphela ukwandisa ukufikelela kwezokhenketho.
Umsitho uza kudibanisa ngaphezulu kwamazwe angama-20 nge Umhlaba Icandelo elibonisa iSaudi, iQatar, iMorocco, iTunisia, iJapan, iThailand, iPhilippines, iCuba, iColombia, iJordani, iMaldives, iSeychelles, kunye neYurophu, iSlovenia, iCroatia, iGrisi, iNorway, iPoland, iBelgium, iOstriya, iMalta, iIreland, ne Sayiprasi.
“Njengokuba ilizwe liqhubeka livula kwaye lihamba likhuselekile kwakhona, ukuthatha inxaxheba kwethu kwi-TTG Travel Experience kuyahambelana nesicwangciso-qhinga sethu samazwe aphesheya sokukhuthaza, ukubandakanya kunye nokuguqula, ukubuyisela ebomini iSaudi yokunikezela okwahlukileyo kwezokhenketho zenkcubeko, iindawo zelifa lemveli ezikumgangatho wehlabathi, kunye nokunyaniseka Ukubuka iindwendwe eArabia, utshilo uFahd Hamidaddin, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba seGunya lezoKhenketho eSaudi (STA)
UFahd Hamidaddin, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba seGunya lezoKhenketho eSaudi
I-STA inoxanduva lokwazisa nge-Saudi Arabia njengendawo yokhenketho. Umbutho ujolise ekuphuhliseni ubuhlakani namaqabane orhwebo kurhwebo kwihlabathi liphela, ukwandisa ukufikelela kukhenketho lwaseSaudi kunye nokuqhuba ukuguqulwa kweemarike zemithombo ephambili.
"I-Saudi Arabia inobutyebi beendawo ezinomtsalane zabahambi, uLwandle Olubomvu oluqaqambileyo, iindunduma ze-Arabhu ezoyikekayo, iindawo ezityebileyo zenkcubeko kunye nelifa lemveli, kunye nolungelelwaniso lokuzonwabisa olunikezelwayo," utshilo uMnu Hamidaddin. "Ngoku imida yethu ivulekile, sijonge phambili ekwamkeleni iindwendwe zamanye amazwe ngeentliziyo ezivulekileyo nangengqondo evulekileyo."
“Siwongekile kukuthatha inxaxheba kwe-Saudi Arabia njengelizwe lamaqabane e-TTG. Ukubandakanyeka kwamazwe angama-23 kuqinisekisa ixabiso leemarike zamanye amazwe athe umsitho wethu unazo kwiinkampani zokhenketho zase-Itali kunye namandla afanayo kubathengi bangaphandle. Kumanqaku amane ehlabathi, ukusuka eIreland ukuya eSeychelles, ukusuka eCuba ukuya eJapan, kupapasho lomsitho we-IEG lowama-2021, ukuzithemba kungoyena ndoqo kushishino lwezokhenketho lwamazwe aphesheya, utshilo uCorrado Peraboni, umphathi weQela leMiboniso lase-Itali.
Umxholo ophambili womsitho walo nyaka eItali is Qiniseka. Lo mxholo ubeka ubudlelwane bokwenene kwinqanaba leziko lokuthembela kwaye usicela ukuba sicinge ngendlela abathengi banamhlanje abafuna ngayo iimveliso ezingaphezulu kwako konke ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuba sempilweni. Ukusuka kwiinkampani, ke ngoko, silindele uvelwano, isiqinisekiso, kunye nokuba kufutshane, kunye nokuzinikela okuqinileyo, okubona ishishini lokuhamba nelokubuka iindwendwe liphambili.